Ny fahafaha-manararaotra any UK ho an'ny mpampiasa vola - Dubai Real Estate avy amin'ny Provident
Ny fahafaha-manararaotra ao Angletera ho an'ny mpampiasa vola
Ny fijery ankamantatra iray dia mijery ny cap de 2017 amin'ny ambony avo, nefa mbola mitady ny fahafahana mifampiraharaha vahaolana ara-bola bebe kokoa ny mpampanofa bola Golfer marevaka, hoy i Enness, brokerage iraisam-pirenena britanika.
"Ny tahan'ny zanabola izay mbola kely kokoa noho ny taona lasa dia midika izany amin'ny famerenana refinance ho ambany, ary ny famatsiana ny famatsiam-bola ho an'ny fampiasam-bola hafa," hoy i Toby Johncox, solontena lehiben'ny Enness.
Ny pound dia nankasitraka manodidina ny 12 isan-jato nandritra ny UAE Dirham tamin'ity taona ity, saingy tsara lavitra noho ny taham-pivoarana avo lenta nataony talohan'ny nifidianan'i Angletera niala ny Vondrona Eoropeana tamin'ny volana jona 2016.
Eness dia miara-miasa amin'ny mpanjifa marobe mba hanangona vola ary hampiasa vola any amin'ny tsenam-barotra avo lenta toy ny, fananana any amin'ireo tanàna hafa any Eoropa na any Eoropa, fivoarana ara-barotra, ary tombontsoa hafa amin'ny fampiasam-bola hafa, hoy i Johncox.
Ny brokerage tsy miankina dia nanokatra birao iraisam-pirenena fahaefatra tany Dubai tamin'ny herintaona.
Ny fanokafana birao vaovao any amin'ny faritra misy ampahany lehibe amin'ny HNWs dia midika ho an'ny brokerage mahaleo izay manana banky 250 maneran-tany.
"Nahitantsika ny fitomboan'ny 31 isan-jato ao amin'ny mpanjifa GCC mitady ny famatsiana vahaolana amin'ny UK sy Eoropa," hoy izy.
Na izany aza, ny lanjan'ny trano fananan'i Londres dia mbola manan-danja, araka ny voalazan'i Johncox. "Na dia eo aza ny fahavoazana be loatra sy ny haavon'ny tatitra any amin'ny tsenan'ny trano fanorenana ao Londres, dia mbola miezaka mitady olon-kafa ny mpampiasa vola midadasika (HNW)," hoy izy.
Ny tahan'ny fananana dia mihandrona, fa miaraka amin'ny varotra kokoa, ireo mpividy dia afaka mijery ny fahazoana mangarahara amin'ny fametrahana ny vidiny, araka ny voalazan'i Johncox. "Miara-miasa amin'ny mpividy izahay izay manao £ 500,000 amin'ny fananganana trano efa nomanina hividy azy tamin'ny herintaona. Miandry ny hofan-trano amin'izao fotoana izao noho ny £ 2.3million, fa tsy ny vidin'ny £ 2.8million izay nalaina tamin'ny voalohany, "hoy izy.
Ny banky koa dia manana ny fironana hanosihosena maina, hoy i Johncox, izay tsy tokony hapetrahan'ny mpanjifa ny fanànana ny banky amin'ny fitantanana ny banky na ny famatsiam-bola amin'ny fiarovana ny enta-mavesatra. "Ohatra iray hafa momba ny fahafahana any amin'ny tsenan'ny trano fananana ao Londres," hoy izy.
Next PostManaraka Toeram-pialantsasatra ivelan'i Dubai avy any Emaar